Yini isikhathi esihloniphekile semarathon? - U-Armstrong
Main > U-Armstrong > Lance armstrong marathon isikhathi - unganquma kanjani
Lance armstrong marathon isikhathi - unganquma kanjani
Yini isikhathi esihloniphekile semarathon?
Ngaphakathi kwebhodi, abantu abaningi baqeda amarathonngamahora ama-4 kuye kwangama-5, ngemayela elijwayelekileisikhathiyemizuzu engu-9 kuya kwengu-11.5. Ukuqedelaisikhathilokho kungaphansi kwamahora amane kuyimpumelelo yangempela kuwo wonke umuntu ngaphandle kwabagijimi abakhethiwe, abangaqeda cishe emahoreni ama-2.
Sawubona iqembu, lo nguJames ovela kuKinetic Revolution futhi kungumsebenzi wami ukukusiza ugijime ngokuqinile futhi ungalimali. Namuhla ngifuna ukukhuluma ngendlela oziqeqeshela ngayo imarathon yakho yokuqala ukuze uzuze kakhulu kuhlelo lwakho lokuqeqeshwa kwemarathon. Futhi impela, uma ufuna uhlelo lokuqala lokuqeqeshwa kwe-marathon, ngizoshiya isixhumanisi sesitshalo samahhala enginaso kuwebhusayithi yeKinetic Revolution encazelweni engezansi.
Ngakho-ke iphuzu lokuqala engifuna ukulibeka cishe liyingxenye enkulu neyethusayo yokuqeqeshwa kwemarathon, ingxenye ebeka abantu abaningi kude futhi lowo ngumqondo walabo bantu abagijimayo. Leyo mijaho emide ibaluleke kakhulu, ukwakha ukuqeqeshwa okude okwakha okuvela kuwe, uma wenza uhlelo lokuqeqeshwa lwe-marathon uzoba mnandi uma uzungeze umaki wamamayela ayi-8, umaki wamamayela ayi-10 akudingeki ukuthi ube, into elula okwakho manje, kepha kufanele uqiniseke ukuthi UNGAGijima amamayela ayisishiyagalombili noma ayishumi. Leli yindawo enhle yokungena ohlelweni lwe-marathon, kepha kusukela lapho kufanele sikwenze lokho amasonto amaningi, ngaphezu kochungechunge olulodwa lwezinyanga ezengeziwe kuze kube seqophelweni lapho unezifundo ezithile zemarathon ezinde lapho uzoba khona Uma ngishaya lezo zinkulu Izinombolo futhi, ake sithi amamayela ayi-18, njengohlobo oluthile lokuma okuhle kokuqhutshwa koqeqesho olude lwe-marathon.
Imvamisa ngibuyisa abantu bezungeza lawo mamaki angama-30 amamayela futhi, kepha kuya ngomgijimi kumgijimi. Abanye abantu, kuya ngokuthi uhamba kancane kangakanani, ukugijima okude, okulula, bazogijima ngejubane lapho Ungashayi khona imayela lama-30 emahoreni amathathu nohhafu, futhi ngithola ukuthi cishe lelo phawu lehora ezintathu nohhafu . futhi okunye okuthe xaxa kwabanye abantu, kuncane kancane kwabanye abantu, kepha cishe kulawo mahora amathathu nohhafu kuyiphuzu lokuncipha kwembuyiselo, lapho uthola khona izinzuzo zesikhathi sokwakha ezinyaweni zakho, ukwakha amandla emilenzeni yakho ngaphezulu Zonke izinzuzo zokwakha zitholakala enjinini ye-aerobic engaphansi.
Njengoba wakha amandla akho aze afike ezingeni lapho ukhathala khona futhi ukhathale nje, awuzenzi nje ukuthi ukhathele ngokomzimba ukuthi kuzokuthatha isikhathi eside ukuzitholela ukululama, kepha ngaphezulu ukuze uqale ukuhamba ngesimo lokho kungenzeka kukulimaze. Futhi, ukulimala okuningi okuvamile esikubonayo ekuqeqeshweni kwe-marathon kubonwa ngabantu abanezinto ezifana nedolo lomgijimi, ikakhulukazi i-ITB syndrome. Ngokuvamile lokhu kuvame ukuqala ukuzenza saziwe njengoba sifika kulawo masonto amakhulu emamayela nakulabo abade, abagijimayo.
Noma ngabe ufika ephuzwini, noma ngabe yisikhathi sakho sokugijima semayela eli-18, noma usikhahlela amahora amathathu nohhafu, angazi angiboni nzuzo yokweqa lokho. Ngiyayiqonda ingxoxo, ngiyaqonda ukuzimisela, noma cishe umuzwa wokuthi lapho kufanele ugijime umncintiswano webanga elide, kufanele uhambe ngaphezu kwalapho. Futhi ake sithi uyazi uma kungewona umncintiswano wakho wokuqala futhi uzama i-PB, kunjalo, ingxoxo engaphambi kwamakhilomitha angama-20, amamayela ambalwa angama-20 endaweni eyodwa yokuqeqesha, mhlawumbe ukukhuphuka nokwenza amamayela angama-22, kuya ngawe, kuya ngeyakho Ukugijima umlando nezinhloso zakho.
Kepha umqondo wonke, futhi ngiwuzwa kaningi ngabagijimi abasha be-marathon noma abantu abakhuphuka besuka ku-10K no-half marathon webanga baya kumarathon, umqondo wokuthi kufanele ugijime ibanga eligcwele ekuziqeqesheni uyahlanya, awudingi neze . Ngiyakuqonda ukuthi kukunikeza ukuzethemba kwengqondo futhi lokho kuyinto eyodwa, ukuzethemba kubalulekile. Kepha ukuzethemba okutholayo uma uqhathanisa nesikhathi osithathayo ukululama kusuka kumamayela angama-26 ekuziqeqesheni, ingasaphathwa eyengozi yokulimala, akusikho ukuyekethisa okuhle nhlobo, okubaluleke kakhulu imayela lakho lamasonto onke.
Kulungile, ngakho-ke ukusuka lapho siqala khona futhi ukuhamba kwakho isikhathi eside kufanele kube ntofontofo, noma okungenani kube ngamamayela ayisishiyagalombili kuya kwayishumi, ngokuhamba kwesikhathi sizokwakha lokhu, sakhe lokhu, sakhe lokhu kuze kube sezingeni lapho cishe kungamamayela ayi-18, noma amathathu nokugijima okuyingxenye yehora. Kepha nakulesi sikhathi esakha ngaso ama-run amade, yithi, ama-run amade ngeSonto, sakha nemileage yakho yamasonto onke. Kulungile, sakha nenani lama-run, okufanele ukwenze evikini ngokwakho.
Ngoba lokho kukodwa mhlawumbe kuyisici esikhudlwana noma into enqumayo empumelelweni uma kukhulunywa ngosuku lwe-marathon kunokuba ngabe ukwazile ukuqhuba lawo makhilomitha ayi-18, lawo mahora amathathu nohhafu ebhentshini. Impilo iyenzeka, izinto ziyenzeka, ukugula, ukulimala, ungagcini iminwe yakho iwele, kepha futhi sebenza, mndeni, hamba, zonke lezi zinto ongazizwa ngathi, 'oh, ngifisa sengathi ngabe benginamanye amamayela ayi-18 noma amabili ebhentshini '
Ingabe uLance Armstrong umgijimi omuhle?
Iqala imizuzu engama-22 ngemuva kwenkundla,U-Armstrongwangena indlela yakhe egcwele waqeda ngesikhathi esingu-3: 02: 13,kuhleokwama-58 jikelele. Wadlulisa inani labantu abayi-2,594, waqoqa isamba esingu- $ 5,326.
U-Lance Armstrong usanda kwenza ukubuya, ukubhema okungcwele, lokhu akuseyona into eyaziwayo, lo mfana unethalente ngempela, wayeyimbongolo ephelele, kwenzenjani, ama-Trainiacs, ngicabanga ukuthi namuhla sizokwenza isiqephu esikhetheke kakhulu se-triathlon taren, ukukhuluma ngento ethile engathi iqhubu emhlabathini laphaya emphakathini wokukhuthazela esingakaze sikhulume ngawo lapha nhlobo, futhi hhayi ama-triathletes amaningi akhuluma ngawo. Kufana nengane yezinwele ezibomvu ye-triathlon esingafuni ukukhuluma ngayo. Ungaba lapho emphakathini wamabhayisikili, ungabuyeli emphakathini we-triathlon, uLance Armstrong.
Uma ubulokhu ulandela ama-podcast futhi uthanda ama-podcast, uyayithanda iTour de France, uzokwazi ukuthi uLance Armstrong ubuyile muva nje. Ngeke wazi ukuthi uLance Armstrong waqala umsebenzi wakhe wokukhuthazela njengompetha kathathu kunokuba umgibeli wamabhayisikili. Ubuye wafaka izinzwane zakhe emanzini omphakathi we-triathlon ehlanganisa i-Ironman World Championship, uDave Scott noMark Allen, kepha akakwazanga ukugxuma ngokuphelele futhi kufana nokuthi onxantathu bezwe abayi ngisho ukuvuma ukuthi kukhona intuthuko ukhiphe i-podcast yakhe entsha nokubukeka kwakhe okusha futhi empeleni umbono wakhe omusha ngempilo muva nje.
Futhi ngicabanga ukuthi kufanelekile ukukhuluma ngakho. Kulungile, ngakho-ke uLance Armstrong akazange aqale umsebenzi wakhe wokukhuthazela njengomgibeli wamabhayisikili, okungenzeka umuntu acabange ukuthi, waqala ukugijima ebangeni eliphakeme cishe eneminyaka eyi-11, 12, 13 ngoba wayefuna ukushaya ingane elandelayo esheshayo esikoleni. Ukuncintisana okuningi? Yebo, uLance unjalo.
Uthole umgijimi oshesha kunabo bonke esikoleni, futhi-ke, ngoba abantu bebona ukuthi unenjini enkulu yemidlalo yokukhuthazela, bamenza wabhukuda, futhi ubengakaze abhukude nhlobo cishe izinyanga ezintathu aqhubeke nababhukudi abancane kunabo bonke isimo. Yebo, uwine ihlangana. Nakulokhu futhi, ukuhamba ngebhayisikili akuzange kuqhamuke ngempela.
Wayegibela ibhayisikili lakhe azungeze idolobha, njengazo zonke izingane, kepha akusikho ukuthi wayeyileso simo sebhayisikili esemusha. Ngokushesha ngemuva kwalokho, eneminyaka engaba ngu-13.14, wangena ku-triathlon.
Futhi uLance ngokwakhe ukhuluma nanamuhla ngamaqhawe akhe okuqala kwezemidlalo, ababengebona abagibeli bamabhayisikili, abagijimi noma ababhukudi, kodwa onqobi bakaDave Scott. UMark Allen, uMike Pigg, uScott Molina, uScott Tinley. Futhi ngemuva nje kokungena kwi-triathlon eneminyaka engu-13, 14, waguquka eneminyaka engu-15, waphuma waqala ukugijimisana neqhawe lakhe kuleyo nkambo futhi wabashaya abaningi, wawina ama-triathlons endawo kungakapheli Unyaka owodwa eqale ukuya kuwo .
Futhi uyabona kusuka kumavidiyo amadala ukuthi noma eneminyaka engu-15 wayekhona lapho enomsila wokuhamba ebusweni bakhe njengoba ayekhona lapho edonsela phansi laba bantu futhi ebaphusha Abantu ababengamaqhawe akhe, kusukela ehhashini labo eliphakeme . Uzwa ezinye zezingxoxo ezivela kulaba bantu bazothi babuka lo mfana oneminyaka engu-15 kulo mzila bese bethi, 'Mhlawumbe ungumpetha onekhono kunabo bonke lapha.' - ULance Armstrong uyamangalisa ngempela.
Ube nemijaho emikhulu kulo nyaka. ULance impela umuntu okufanele amqaphe ngokuzayo - 'Kodwa futhi ungumfana omnandi kunabo bonke esake sababona.' Uzobona umkhuba empilweni kaLance lapha.
Ngakho-ke uLance empeleni wenza ipulatifomu njengompetha wezobuchwepheshe, encintisana nabanye babasubathi abaphambili emlandweni, kanye nabanye babagijimi abahamba phambili abake babhukuda, bahamba ngamabhayisikili futhi bagijima. Wafika emsamo. Wabe esebona ukuthi ufuna ukuya kuma-Olimpiki kodwa wayengeke afinyelele kwi-triathlon ngoba i-triathlon yayingekho kuma-Olympics.
Okwakukuma-Olympics ayecabanga ukuthi anethuba kwakuwukuhamba ngebhayisikili, okwakuxaka ngoba uma ebheka imidwebo yakudala wayengeke ayochoboza inkundla ngebhayisikili. Uvame ukugibela iphakethe eliyinhloko, mhlawumbe phambili nje kancane, ecindezela ijubane kancane, kepha kuzofanele abambe futhi agijime phezu kwabantu. Ngakho-ke washintshela ekugibeleni amabhayisikili ekuqaleni kweminyaka yama-90s, bese simane nje seqa iminyaka engama-20, ukuxilongwa komdlavuza okukodwa kanye neTour de France eyisikhombisa. (iphimbo eliphakeme, likhuluma ngokushesha) Ekugcineni, njengoba sonke sazi, uLance Armstrong ngokusobala uthathe umhlalaphansi ekugibeleni amabhayisikili kwathi ngo-2012 wenza isivumelwano neWorld Triathlon Corporation, i-WTC, ebamba imicimbi ye-Ironman, ukuncintisana emincintiswaneni ye-pro -Half Ironman imicimbi.
Ngaleso sikhathi, abantu abangajwayele ngemvelaphi kaLance njenge-triathlete yentsha enethalente elikhulu babecabanga ukuthi kwakungaleso sikhathi nje esidlangalaleni. Kuyavunywa, bekungaba yi-World Triathlon Corporation eyaziwayo emphakathini, isikhathi sokukhula kwezemidlalo emhlabeni wonke emijahweni egcwele kanye neyemijaho egcwele ye-Ironman. Iqiniso bekungukuthi, nokho, ukuthi uLance Armstrong mhlawumbe ungomunye wabadlali abanekhono lokukhuthazela abake banyathela ebusweni bomhlaba - nje kancane emicimbini yokuqala ayenzile.
Uthi akakwazanga ukuthola ukudla. Wayethatha ukudla okungaka bese ebaleka kuthi kungazelelwe konke kuqhamuke bese eqala ukuphalaza bese eshabalala ngasekugcineni kokugijima. Kepha ngemuva kweminyaka engama-25 yokungancintisi ku-triathlon futhi engaphinde aqhubeke nenqubo yokwakha i-amateur triathlete, bese ebuyela emjahweni weHalf Ironman, ekugcineni wawina iSuperFrog Triathlon neHalf Ironman eHawaii.
Ugijimisane nabadlali abaphambili kulo mdlalo, eshaya abafana abanjengoChris Lieto noTyler Butterfield amanzi kwiHawaii Half Ironman ka-2012 endaweni yesine, endaweni yesine. Uyancintisana nama-triathletes abangochwepheshe abebebhukuda ngokungaguquguquki amashumi eminyaka, uza endaweni yesine, imizuzwana nje ngemuva komholi. Ungahambi uyoqeda insimu ngoba wayazi ukuthi kufanele aphume abaleke, ngakho-ke uhlinzeka ngezithuthuthu ezisheshayo kule micimbi, azuza ngayo cishe imizuzu emithathu kuya kwemine.
Ngokuyinhloko ukuqala kwekhanda okunethezeka abekwazi ukuthi kungadela isikhathi esincane ekugijimeni bese wenza kahle. Usagijime umjaho wemarathon engu-1: 22, okungowesine osheshayo osukwini eHawaii. Futhi kwiSuperFrog 70.3 Triathlon bekufana ngokufana.
Iphakethe langaphambili lapho ubhukuda, ibhayisikili elisheshayo, hhayi kakhulu, kodwa lanele ukwakha ukuhola okunethezeka bese wenza ipakethe eliqinile langaphambili. Futhi-ke, ngenkathi abantu bekhuluma ngakho, ngabe uLance Armstrong ulungile ngokwanele ukuwina uKona? Futhi wakhuluma ngokwakha ngokumelene noKona. Futhi wonke umuntu waqala ukuthi, intuthu engcwele, lokhu akuseyona into yokuduma emphakathini.
Lo mfana unekhono ngempela. Futhi iKona iyinkambo esinda kakhulu yebhayisikili. Hewu Nkosi yami.
Kuzokwenzekani? U-Oprah wenzekile. Bese kuthi eminyakeni emihlanu eyedlule, uLance Armstrong kusobala ukuthi wakhishwa inyumbazane yiyo yonke imidlalo, ngazo zonke izindaba zakhe, ngumlingiswa wakhe. Kusukela lapho, impilo yakhe isishintshe ngokuphelele.
Njengoba ngivula isibhicongo esiphelele kumazwana lapha, nakhu engikuthatha kuLance Armstrong nokuthi wenzeni phakathi nokunqoba kwakhe okuyisikhombisa kweTour de France. Ingabe wenza i-dop? Yebo impela. Ngabe wonke umuntu udop? Yebo impela.
Ngicabanga ukuthi wayengumgibeli wamabhayisikili ohamba phambili? Yebo, ukuzidambisa ngokwalo ngikholelwa ukuthi kwakusakazeke kakhulu emphakathini wonke ukuthi kwakungafani nokuthi wenza uhlelo oluhle kakhulu lokusebenzisa izidakamizwa olwamenza waba namandla angaphezu kwawomuntu, wonke umuntu wayesohlelweni lokusebenzisa izidakamizwa. Futhi iqiniso ukuthi, bekusamele ube nekhono, kusamele usebenze, futhi uLance Armstrong wayenethalente kakhulu, futhi wathi ngicabanga ukuthi, nokho, ukuthi ukusebenzisana kwakhe nabalingani bakhe beqembu, nomphakathi, nabalingani bakhe bebhizinisi kwakugcwele ubuwula, nokuthi, yebo, mhlawumbe wayefanele ukukukhokhela. Ubulukhuni balokho obekufanele akukhokhele, ngingasho ukuthi imiphetho kungenzeka iqine kancane uma izama ngokuyisisekelo? konakalisa umfana, hhayi okwamanje, kodwa kuze kube phakade, futhi wonke umuntu uzophunyuka.
Kulapha benginenkinga noLance Armstrong, ikakhulukazi ingxoxo ye-Oprah. Wayezivikela kakhulu ekuvumeni ukuthi uyisidoda. Kodwa-ke, uLance Armstrong manje usengumfana ohlukile kunalapho ayenengxoxo ne-Oprah, futhi uyakuvuma ngokuphelele.
Eminyakeni embalwa edlule, uLance uqale ukubonakala kuma-podcast. Futhi sekuphele iminyaka emihlanu enza le ngxoxo ka-Oprah. Le ngxoxo ka-Oprah ibiphuthuma futhi iphoqelelwa ngoba bekufanele axhawule ngaphambi kokuba uhulumeni akwenze kuye okokuqala.
Akuvumayo manje ukuthi ubengakulungele. Futhi noma kunjalo ubengenaso isikhathi sokuma kancane abone ukuthi yini, bengilokhu ngiphatha abantu njengodoti futhi kufanele bangithukuthelele, futhi kungifanele, ubesavikela ngalesi sikhathi . Cishe unyaka nohhafu, waqala ukucubungula ngokuba kuma-podcast abanye abantu.
Wayengowokuqala ukubona uJoe Rogan. Futhi lapho ngizwa ukuthi bengifana nokuthi uyazi yini, kuzwakala kwehlukile kancane. Usenqena kancane, engakavuleki ngokuphelele, kepha ubukeka sengathi uyazisola kancane.
Ukushesha phambili ngasekuqaleni konyaka, kuvela kuWoward Stern. Ngisho nokuzisola okuthe xaxa ngendlela aziphathe ngayo eqenjini lakhe. Qala i-The Forward Podcast futhi ngizoyilalela, njengoba wazi ukuthi ngingahle ngilalele nokuthi leso silima sithini, kepha sakhula kimi.
Futhi ngenkathi i-podcast iqhubeka, futhi ngikholwa ukuthi uLance waqala ukubona ukuthi lapho evula kakhulu, kulapho azibuka khona ngaphakathi futhi wabona ukuthi akusadingeki ukuthi azivikele, ukuthi akudingeki alwe nezwe ukuthi udinga nje ukuvuleka ngokuthembeka ngokwengeziwe nabantu abaseduze naye, kubonakala sengathi ubekhululekile futhi ethembekile emphakathini nakuye uqobo. Futhi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, ngizoxhumanisa lokhu encazelweni engezansi, kuvele kuThe Rich Roll Podcast naku-Aubrey Marcus Podcast. Ngizamile ukumfaka ku-Triathlon Taren Podcast futhi ngasendleleni, uma uhlangana naye ku-Twitter noma ku-Instagram bese uthi, 'Sawubona, iya ku-Triathlon Taren Podcast', mhlawumbe singakwenza lokho kube yiqiniso.
Ungalalela lokhu ubone ukuthi yindoda ehlukile ezikhathini ze-Oprah. Ngabe nami ngiku-Team Lance? Ngimnika ukudlula mahhala ngithi uyazi yini, uLance, mfana omkhulu? Cha. Kuzofanele aphile nendlela axhumana ngayo nomphakathi nawo wonke umuntu omzungezile impilo yakhe yonke.
Kepha uyakwazi lokho manje, kubonakala sengathi uyaxolisa ngakho, futhi okungenani angigijimisi ngezimfoloko futhi ngithi ngokungaboni: Lance Armstrong, ungusathane. Abantu kufanele babe nomqondo ovulekile ngokwengeziwe ngoba izinto azimnyama futhi zimhlophe njengoba kwesobunxele noma kwesokudla okulungile kwezepolitiki noma okulungile nokungalungile kuhlala kuyimpunga. Futhi ngicabanga ukuthi uma sivula izingqondo zethu kubantu, emibonweni, imicabango emihle nje, siyoba ngabantu abangcono balokho.
Ngokwethembeka, iyiphi injabulo ongayithola uma ungachitha impilo yakho yonke uzonde uLance? U-Armstrong? Inzondo ayisiwo umuzwa okhululekile, kepha uma ubunekhono lempilo yakho yonke lokulalela ngokusobala kumfana ongenabo ubuthi kuwe, ungalalela ama-podcast amahle kakhulu okusho ukuthi kuzofanele ukhombise kuze kufike kumbukiso lapho kwenzeka noma yini kuye. Kepha imicabango ebucayi, amaTrainiac, imicabango ejulile ngoLance Armstrong. KULUNGILE.
Lokho namuhla. Lance, ngilapha mngani. Sine-podcast enhle.
Ngisiphi isikhathi semarathon esimaphakathi sabaqalayo?
cishe ngo-4: 30
Yini isikhathi se-elite marathon?
Isikhathi esimaphakathi semarathonngobaabaqalayo
Anisikhathi semarathon sabaqalayoingena cishe ngo-4: 30 kwabesilisa no-4: 45 kwabesifazane.
Ingabe ukugijimisa imarathon kuyamangaza?
IyagijimaAmamayela angama-26.2 akakaze abe ngamamayela wokugcina angama-26.2. Kungabonakala sengathi kunjalo kodwa kumayelana nohambo olukufikisele kulawo makhilomitha athile. Kusukela ngosuku lokuqala owaqala ngaloegijimakuze kube yilapho weqa umugqa wokuqeda. Yebo yebo, kusenjalokuyakhanga.
Ngabe ungagijima umncintiswano ngaphandle kokuqeqeshwa?
Lungiselela ukululama okude futhi okubuhlungu umawenaakazangeisitimelakahle, kusho uFerrerras.Ukugijima imarathon ngaphandle kokuqeqeshwa kungakwenzathumelawenaesibhedlela futhi kubangele ukuqina kwemisipha, ukuqhekeka kwengcindezi, nokulimala okuhlangene okuhlala isikhathi eside.20.08.2019
Ngabe uLance Armstrong angagijima ngokushesha okungakanani imayela?
U-Lance Armstrongwagijimisa eyakheesheshayoi-marathon ngo-2: 46: 43, eNew York City Marathon ngo-2007. Lokhu kulingana nokuhamba ngemizuzu engu-6.22 ngomzuzuimayela.
Ngabe wonke umuntu ushaya udonga ngesikhathi semarathon?
Akunjalowonke umuntuogijima aimarathon izoshayaiudonga. Kunezici eziningi eziba nomthelela kule nto, kanti ezinye zingaphansi kolawulo lwakho ngenkathi ezinye kungenzeka zingabi khona. Ngenjwayelo,eshaya udongaKusho ukuqeda i-glycogen yakho egciniwe kanye nemizwa yokukhathala nokunganaki okuhambisana nakho.
Yini okuhamba kancane ongagijimisa umjaho webanga elide?
Abanyeamamaronshlala uvule amahora ama-5 kuphela, okuyinto engavamile, kuyilapho inani elincane le-amamaronshlala uvulekile kuze kube ngamahora we-9. I-ihamba kancaneijubane elijwayelekileungagijimaihora eli-7marathonkanti usawuqeda umjaho imizuzu eyi-16: 01 / imayela (9:57 kilometres / mile).
Ngabe u-Usain Bolt usebenze umjaho webanga elide?
Usain Boltuphethe irekhodi emikhakheni eminingi yokugijima, kepha angakwazi yini ukuma aqine komunye wemijaho ebanga kakhulu ebanga elide amarathon?Usain Boltakukazeugijime umncintiswano. I-sprinter yaseJamaican ibibambe iqhaza kuphela emicimbini yebanga elifushane nasemicimbini yasensimini futhi ayikaze incintisane emijahweni yamabanga amade.
U-Lance Armstrong uwine kangaki iTour de France?
U-Lance Edward Armstrong (né Gunderson; Septhemba 18, 1971) ungumgibeli wamabhayisikili owake waba ngumqeqeshi waseMelika. Kuthathwa njengesithonjana sezemidlalo sokuwina iTour de France amahlandla ayisikhombisa alandelanayo kusuka ngo-1999 kuya ku-2005, isithunzi sika-Armstrong sonakala ngehlazo lokudonsa izidakamizwa elaholela ekutheni aphucwe zonke iziqu zakhe zeTour de France.
U-Lance Armstrong uthathe umhlalaphansi nini kubhayisikili okhokhelwayo?
U-Armstrong uthathe umhlalaphansi emjahweni ekupheleni kuka-2005 Tour de France, kodwa wabuyela emqhudelwaneni wamabhayisikili wokuncintisana neqembu le-Astana ngoJanuwari 2009, waqeda isithathu ku-2009 Tour de France kamuva ngalowo nyaka. Phakathi kuka-2010 no-2011, wagijima neTeam Radio Shack, i-UCI ProTeam asize ukuyithola.
Wayeneminyaka emingaki uLance Armstrong lapho abazali bakhe behlukanisa?
Abazali bakhe bahlukanisa ngo-1973 lapho uLance eneminyaka emibili. Ngonyaka olandelayo, umama wakhe washada noTerry Keith Armstrong, umthengisi othengisa kakhulu, owamukela uLance ngalowo nyaka. Lapho eneminyaka engu-12 ubudala, u-Armstrong waqala umsebenzi wakhe wezemidlalo njengomuntu obhukuda eCity of Plano Swim Club futhi waqeda isine eTexas esifundazweni sama-1,500 freestyle freestyle.